Huawei anosaina Justing Long, mutambi weiyo "Get a Mac" mushandirapamwe weayo ma ads | IPhone nhau
Huawei anosaina Justing Long, mutambi weye "Get a Mac" mushandirapamwe weayo ma ads
Zvinotishamisa kuona Justing Yakareba, nyeredzi mune yekushambadzira kunze kweApple mushure memushandirapamwe unozivikanwa we "Get a Mac" uyo airatidzira mutambi uyu pamwe chete nemumwe mutambi John Hodgman. Mushandirapamwe weApple wakagadzirwa neApple Inc. nesangano rekushambadza rakabatwa nekambani TBWA \_ Media Arts Lab, uye mariri kushambadza kushoma kwakatangwa kubva muna 2006 kusvika 2009 kwakaratidza musiyano uripo pakati pekuve neMac kana PC uye pakutanga yemushandirapamwe mutsara uyu waiti: "Mhoroi, ndiri Mac."
Hatina kukahadzika kuti Long naHodgman vanozorangarirwa nebasa iri rakaitirwa Apple asi nguva inopfuura uye zvino Long anogona kuonekwa achipa chiziviso chake chekutanga kunze kwekambani yeapuro yakarumwa, kunyanya neHuawei. Mune ichi chiziviso hazvidzivisike kucherechedza mbiri, Yokutanga ndeyekuti mutambi, Justing Long, time inoita kunge isingapfuuri uye chechipiri ndechekuti "Tora Mac" hazviite kudzokorora kunyangwe zviitwe zvakafanana vashandisi. Pano tinosiya chiziviso cheHuawei icho chiri pachena hachinei nechekuita nezveaApple:
Kana isu tichiona aya ma ads hazvidzivisike kuzvienzanisa asi iyo basa revamwe vatambi mumashambadziro ekushambadzira kana kutogadzira mafirimu kubva kumakambani eetekiniki seApple, sebasa rekumanikidzwa raAshton Kutcher muMabasa kana basa rakanyatsoitwa muSteve Jobs biopic naMichael Fassbender pabasa rake sa CEO wekambani padivi pe stellar Kate Winslet, mune basa raJoanna Hoffman .
Muchidimbu, tekinoroji uye firimu kana terevhizheni zvakagara zvine hukama hwakafanana uye hazvigoneke kuti usayeuke uye unakirwe nemushandirapamwe we "Get a Mac" zvisinei nekufamba kwenguva uye nenyaya yekuti Mac anogara achifarirwa. zvakanaka kuona kururamisira kwenguva refu, zvekare kunyangwe ari kushambadzira kure nebasa rake naApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Huawei anosaina Justing Long, mutambi weye "Get a Mac" mushandirapamwe weayo ma ads
Inofungidzira 2 ye iPhone nePadad inogamuchira zviyeuchidzo zvakapfuma uye zvitambi zveMessage
Rarama kwenguva refu mapikicha: iyo iPhone 7 Plus ndiyo inonyanya kufarirwa modhi yenguva yacho